ठूलो रोमान्टिक»संग आएको»मलाई इशारा. लगभग आधा लागि महिला उत्प्रेरित गर्ने प्रेम बाहिर, कि धेरै छैन, नयाँ सर्वेक्षण अनुसार. घरमा मान्छे अन्तरवार्ता थिए पत्ता लगाउन कसरी, तिनीहरूलाई थुप्रै थिए उत्प्रेरित गरेर आफ्नो सम्बन्ध र अर्को भयो के. यो बाहिर जान्छ कि बढ गर्न अर्को महत्त्वपूर्ण व्यक्ति भन्दा साधारण छ, तपाईं जस्तो लाग्छ । लगभग पाँच मा एक रिपोर्ट उत्तरदाताओं सम्बन्ध भएको र बढ को तेस्रो गर्नेहरूले त एक पटक भन्दा बढी. महिला भनेर रिपोर्ट थिए तिनीहरूले थोडा अधिक संभावना प्रगति गर्न मानिसहरूको भन्दा । परिवर्तन पछि, अठार प्रतिशत बताए परिवर्तन बचत गर्न सकेन आफ्नो रकी सम्बन्ध, सत्र प्रतिशत आफ्नो नयाँ परिस्थिति, र एघार प्रतिशत गिर पनि अरू कसैले प्रेम. पछि सबै, यो बारेमा थाह पाएपछि जहाँ आफ्नो मान छन्.»कदम, यो प्रेम छ,»उनी भन्छन्,»खतरा।»मा मेरो जीवन, म, लाग्छ छैन भनेर काम गर्न एक पर्याप्त कारण सार्न गर्न एक ठाउँ जहाँ सम्बन्ध निर्धारण जहाँ म छु । अन्य शब्दहरू मा, निर्लज्ज, कि तपाईं सार्न चाहनुहुन्छ प्रेम लागि, कि यो काम गर्दछ वा छैन । म उत्प्रेरित भन्दा सबै देश को लागि एक सम्बन्ध छ । हामी कुरा धेरै पहिले, समयमा र पछि सुनिश्चित गर्न भनेर मेरो कदम थियो बस अर्को नयाँ पोस्ट रूपमा. यो राम्रो थियो किनभने, केही वर्ष पछि हामी मित्र भए । तर म अझै पनि प्रेम प्रशान्त उत्तर पश्चिमी, मित्र, आदि सार्न. उहाँले भन्न भूल कि अरू कसैले उहाँलाई देखे । चार महिना भित्र. उहाँले दूर मिल्यो देखि यो एक जबकि लागि. मेरो मात्र सल्लाह: साथी।»मेरो पति र म विवाह गरेका थिए तर अमेरिकी शहर गर्दा उहाँले काम मिल्यो. उहाँले बाहिर उत्प्रेरित, र एक महिना पछि म, पछि उहाँलाई छोडेर, मेरो सपना. यो कदम मलाई नेतृत्व गर्न संलग्न भएको फिल्म व्यापार पूर्ण — समय, र हुनत म थियो बारे धेरै चिन्तित एक काम रही, सबै गए भन्दा धेरै राम्रो म आशा । पाँच वर्ष पछि, र म छु अझै चलिरहेको मेरो व्यापार पूर्ण-समय । चाहन्छ. उहाँले एक परिवार थियो कि यहाँ. खुसीको कुरा, मेरो अविश्वसनीय टाढा परिवार मलाई मदत प्राप्त यस मा घर जब हामी माथि भङ्ग । मेरो फाइदा छ भनेर शक्ति को सन्तुलन वास्तवमा तिर साथी संग सबैभन्दा ठूलो वित्तीय सुरक्षा र कनेक्शन मा शहर (स्नान, म सोच्न).
पछि म एक्लै छोडिएको थियो फेरि, म थियो खेती गर्न धेरै स्वतन्त्र र परिपक्वता. म यो गरे जब म एक बच्चा थियो. कि जस्तो लाग्छ मेरो छोरी यो गरे. त्यो समय मा, म उत्प्रेरित गर्न बोस्टन देखि लस एन्जलस संग मेरो प्रेमी. म कहिल्यै बस्थे खुसीसाथ उहाँलाई संग, तर उहाँले बसे मलाई र मेरो पति मा लस एन्जलस, र पाँच वर्ष पछि म उत्प्रेरित छन् । म उत्प्रेरित संग एक मान्छे देखि एक पिट्सबर्ग पब्लिक बोर्डिङ स्कूल फिलाडेल्फिया । प्राण थियो म कहिल्यै बस्थे फिलाडेल्फिया, या पनि यो भ्रमण दुई पटक भन्दा बढी.
काम मेरो लागि प्रतीक्षा
फिर्ता देख, यो सबै जस्तै, एक शान्त लड्न । प्रारम्भिक वर्ष थिए कठिन छ । म विवाह गर्न चाहन्थे, तर म थिएन, त्यसैले हामी थिए. म रुचि छैन, यो सोच्न क्षण, तर अन्त मा यो थियो कि एक जोखिम काम गरे । हामी विवाह भएको वर्ष र दुई छोराछोरी छन् । म उच्च विद्यालय स्नातक र छ दिन पछि देखि उत्प्रेरित आयोवा, कोलोराडो, हुन नजिकै एक मान्छे म भेट मेक्सिको मा वसन्त ब्रेक मा. म सबैलाई भन्नुभयो तिनीहरूले सुन्न चाहन्थे कि मेरो कदम संग गर्न केही थियो केटा (सहित उहाँलाई). म बेरोजगार थियो, कुनै आशा, कुनै ठाउँमा बस्न, र बारेमा छ सय डलर मेरो खल्ती मा. हामी विवाह र तिनीहरूले एक सुन्दर एक वर्षीया छोरी छन् । म एक केटा भेटे मा याहू जब म थिएन प्रयोग गर्न अनलाइन डेटिङ, र उहाँले देखि उत्प्रेरित गर्न फ्लोरिडा रालियफ. हामी विवाह गरेका थिए लागि वर्ष र दुई छोराछोरी छन् । म बुझे, कि यो लायक थियो जोखिम भन्ने कुरा देखिन्थ्यो पागल सबैलाई. साथै, यो सधैं सक्छन् कदम फेरि । म उत्प्रेरित देश भर र बायाँ क्यारियर म प्रेम संग मेरो पति, एक क्यारियर सिपाहीले, केही महिना पछि हाम्रो विवाह । यो गरेको एक वर्ष भएको र म अझै पनि प्रयास गर्दैछु यो बाहिर आंकडा, तर म छु धेरै सिकेका बारेमा आफैलाई र मेरो सम्बन्ध । यो थियो एक वर्ष को समझ, व्यापार, स्वीकृति, सिक्ने, र माथि बढ्दै. मलाई महिना को एक जोडी पछि किनभने, म स्पष्ट यो मन पर्यो जब म थियो पनि टाढा हेर्न उनको नियमित. तर उहाँले छोडेर एक लामो समय पहिले, जबकि म अझै पनि यहाँ बस्न र उहाँलाई प्रेम. मलाई लाग्छ म बल्ल मिल्यो सबै भन्दा राम्रो को. म यहाँ उत्प्रेरित पेंसिल्वेनिया देखि, क्यालिफोर्निया. हामी सँगै थिए पन्ध्र वर्ष, विवाह नौ, दस वर्ष पहिले, र म ल्याए पेंसिल्वेनिया, पनि. जीवन एक जोखिम छ, र जब म यो लिन, म खुसी छु, म पछुतो छैन । म छु उत्प्रेरित गर्न नरफक, भर्जिनिया, जहाँ म भएको कहिल्यै छु, एक सम्बन्ध मा अझै पनि धेरै नयाँ छ, तर धेरै तीव्र र गम्भीर छ । हामी माथि भङ्ग पछि महिना र म मिल्यो एक घर छ । म हुँ अब यो बिक्री, तीन वर्ष पछि, हामी यो किनेको, एक विशाल हानि । म म उत्प्रेरित गर्न निर्णय गर्न कोस्टा रिका हुन मेरो दुई वर्षीया प्रेमी. म बाहिर पाइने उहाँले विवाह भएको थियो, दुई सप्ताह पछि, म आइपुगे । पार्क शहर, र म छानिएन देखि एक पर्यटक एक पल्ट । उहाँले बस्थे मा क्लिभल्याण्ड, तर हामी कि सिकेका उहाँले हुर्क्यो मा इन्डियाना. हामी बन्द पट्टी र खर्च अर्को दुई वर्ष मा स्काइप, सामना पटक, र वरिपरि उडान को देश सम्म हामी अनिच्छा आइपुगे, उहाँले उत्प्रेरित गर्न क्लिभल्याण्ड. हामी विवाह, प्रेम गर्न सिकेका ओहियो, र हामी एक बच्चा छ.
र उहाँले सबैभन्दा ठूलो
एक स्वतंत्र पत्रकार विशेषज्ञता स्वास्थ्य, संस्कृति र प्रविधि, र नियमित योगदान प्रकाशन यस्तो निवारण, महिला स्वास्थ्य, आकार, आकर्षण, पुरुष स्वास्थ्य, जोन्स हपकिन्स स्वास्थ्य समीक्षा, र अरूलाई. महिला स्वास्थ्य सहभागी विभिन्न संबद्ध विपणन कार्यक्रम, जसको अर्थ कि तपाईं प्राप्त गर्न सक्छन् सम्पादकीय आयोगहरु उत्पादनहरु लागि भुक्तानी माध्यम खरिद गर्न हाम्रो लिंक वेबसाइटहरु को रिटेलर ।
← प्रयोग को प्रलोभन मा मेक्सिको: परिचय मेरो ल्याटिन जीवन
किन कोरियाली विवाह माग भन्दा बढी डेटिङ कोरियन महिला । कोरिया डेटिङ सुझाव →